Wp/kjp/ယ်ု - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kjpWp > kjp > ယ်ု
ယ်ုဏင့်ဆာႋ ယ်ုအဲဟှးဟှဝ်၊ ယ်ုဆိုဒ်ဏှ် ယ်ုအဲဝေ့ဍဝ်၊ ယ်ုထူရူ့ ယ်ုအဲတဝ်တဝ်၊ ယ်ုဆ်ုခၠါင် ယ်ုအဲယ်ုလဝ်၊ ယ်ုလိက်ဏှ် ယ်ုအဲယ်ုပဝ်ႋ၊ ယ်ုထီ့ခါန်. ယ်ုအဲလုက်ကဝ်၊ ယ်ုထီသိုဝ် ယ်ုအဲသၞဝ့်။
ဏင့်ဆာ.- ဆိုဒ်- ထူရူ- ဆ်ုခၠါင်၊ လိက်-ထီ့ခါန်.-ထီသိုဝ် နိုဲစာင်၊ ဟ်ုမာဆိုင်ၜေ့မ်ုဍုဂ်ပါင်၊ ပညာ့ဃှေံ ဏှ် ဟ်ုၜးကၠာင်၊ ဆံင်းမံင်းထာင် စှ်ဆံင်းမံင်းထာင်၊ စှ်ဆံင့်မံင်း ယောဝ်လာႋအေယာင်၊ ၜးဍံင်ဟ်ုထင်း ခေါဟ်လံင်ဍောဟ်၊ ခေါဟ်လံင်ဍောဟ် အှ်ဝေ့နိုဲစာင်၊ ထင်းထံင်ဍင်ဍီး ဍးစိုဝ်ယာင်။
၄ ဆိုဒ်ဆတၞိင့် ဟှးသးအေခိုင့်
ဆ်ုယဝ်ခါ့ခေါဝ်.အုဂ်၊ ခေါဝ်.သိုဲ့ထင်းဟ်ုလံင်္ဘုဂ်၊ လီဟှယ့်ပျ သူးသူး၊ လင်အှ်ကွယ် သိင်းလာယှူး၊ သင့်၀၀်ဖေါဟ် ဟှင်းကိုဝ်၊ လ်ုသိင်းခီ့ ယ်ုဟှိုင့်စိုဝ်၊ ကၠင်ကၠာင်းဖဝ့် ၜးဘင်ဖါင်း၊ နိုင်မိုင့်ထင်း ဟ်ုသာစာင်း၊ က်ုတုဂ်စိုဲ ဟ်ုစာ်၊ ထီ့လ်ုအှ် ကၞာ့သာ်၊ ယးအှ်ကုံ လ်ုနံင်း၊ မႝီဟ်သီး လင်အင်းကံင်း၊ ဍောဟ်အင်းခၠါင် ခွိက်ယှး၊ ဆင်းသြုဂ် အင်းခွယ်ပျ၊ ဆေဝ်ဍေဖၠာင် သာအင်း၊ သီ့လင်ထုက် ယးၜးၜေ့ယှင်း။
ဖၠုံဖေါဟ်လ်ုဝီ. ထုင်းလီ.ထုင်းထာင် အးစာင်အးဖၠုံ လ်ုကံင်.ဆ်ုမာ လုက်ခၠာလင်္ဘိုင် ဍးလိုင်လ်ုယဝ့် ပဝ်.သဝ့်ထၝံင့် လံင့်ကံင်လုက်ခၠေ လ်ုကေဝ်ဍေလိက် လင်္ဘိက်လုဂ်ခၠာ ဏိင်းလ်ုယာ။ ပ်ုၜးဘိုဝ်ဏါင်းယိုဝ် ဍးစိုဝ်လင်.ခါင့် သာဟှာင့်စွးတယ် ဖုက်ဖယ်ဏံင်သာ ဆ်ုမာပ္တံင် ကေဝ်ဟှံင်လိက်လာဲ တ်ုကၠယ်ဍောဟ်လင် ဃှူ့ဃှင်မာလောဟ်ဖႜုံယှင်ဖေါဟ်။
ဖံင်းပါႋမိင် မ်ုလောဟ်ကိုဲ ဖေါဟ်သးကိုဝ်ဟှာဍေ။ အှ်ကုံထောဝ်ခါင့်မွာဲဝှဝှ၊ ကိုဝ်ဟှာခါခၠိက်ပျ။ စာင်းလင့်ဝေ့ဖဝ်.ဍေမ်ုဖံင်း ဖေါဟ်သးယှောတ်မေံကံင်း။ သဝ့်မာတယ်ဝေ့ ပီပူပါ၊ ကျုဂ်လေံ ဍေကိုဝ်ယှာ။ ဖေါဟ်သးဟှင်ပေဝ့်ဟှာင်လု်ထိုင့် ကျုဂ်လေံပါကိုဝ်ဖိုင့်။ ဖေါဟ်သးလုက်ဆိင့်ၜးထုင်ကျာ ထီ့ဖါ.ကျုဂ်လင်သာ။ နိုင်ဖဝ်.နိုင်ဖဝ်.ဍေဖ်ုအဝ် ကိုဝ်ပါင်သုဂ်ယှဝ်ယှဝ်။
၁။ စှ်သာလုက်ခၠေ ထီ့ခါန်ပြေဏှ်၊ ဖံင်ဖၠေၜးသာ ကုက်ကိုဝ်ဟှာလှ်။ ဟှေဝ်အွာဆိုဒ်ဆ ဖံင်ဖၠေဝ်ၜးဏှ် ဏေဝ်ၜးလ်ုဖိုင့် ဖံင်းအေခိုင့်ဟှဟ်။ ပု်လိုင့်အးဖၠံင် အေဍးခံင်ဍဝ် လံင့်ကံင်ကိုဝ်ႋၜင် ခိုဝ်ပ်ုဍင်လ။ ဃှူဃှင်မူးခွါ့ မွာဲတုင်.ဆာ့ခဝ့် လ်ုယာ့တာ်ခေါဟ် ဆိုဒ်ဖၠုံဖေါဟ်သီး ပါဍောဟ်ယုဂ်ယာန်း ၜးတုင်ယှင်းလှ်။ မူ.ထင်းလေင်.၀၀် ထာင်အးထဝ်ဏှ် ဆေဝ်ယှဝ်.ဝါဖႜင် လ်ုမုဂ်ဍင်ဏှ် ဖိုင့်ဃှင်ဖံင်းထး အေခိုင့်ဟှဟ်။
၂။ အှ်ပါမုက်ကိုဲ မာလာ ဃှေဝ်ဟှဟ် လုက်ခေႜစှ်သာ လိက်ဟှေဝ်အွာအှ် အးဖါအးစိင် ထံင်လုက်ကၠိင်ဏှ် ကိုဝ်မိင်မာလောဟ် သှ်ေအေဍောဟ်ထဝ့် တာ်ခေါဟ်ဍုဂ်ပါင် ဖၠံင်အးစိုင်ယဝ့်။ ၜးဘုဂ်ယာင်မိင်ဖၠဟ် ပညာ့အှ်ဍဝ် ယှူႋၜးဘှ်ဍေကျိုင် ဆ်ုဟှယ့်ပြိုင့်သီး ဖၠံင့်နိုင်အးဆင့် ဖၠာဲသယ်ဃှင့်အး ဍုံဌာန့်ဆ်ုမာ ဆိုဒ်ဟှင်.ခၠာခဝ့် ထ႟ၮဲဖှ်ေကဲ ဖၠံင့်ဟှးဖၠဲယဝ့် ဍုဂ်ဏဲလဝ်လင် ပညာ့ဖါန်ဏှ် အ်ုၜေ့င်ဖံင်းထး ကိုဝ်ဖိုင့်ဟှဟ်။
၃။ပ်ုလာ.ထုက်သိုဲ့ အင်းကုဂ်ၰိုဲဏှ် ဍောဟ်ပြေဖုက်ကၠံင် သြုက်ထံင်သီး ပ္တံင်တာင်ဝယ် ကဲဖုက်ဖယ်လှ်။ ကးဟှယ်လ်ုဖၠဟ် ၜေ့ၜးသာအှ်ဍဝ် ဍောဟ်ထဝ့်ဆ်ုမာ ဆိုဒ်ဟှာင်.ခၠဘာဝ့် ဟှေဝ်အွာကိုဝ်စာင် တာင်ဍုဂ်ပါင်ယဝ့် လေဝ်ထာင်လ်ုကး ထီသိုဝ်အးလဝ် ဆ်ုဍးအဲကုဲ ၜေ့ဖေါဟ်လီဟှဟ် သီ့ကၠီယောဝ်.ဆိုင် လ်ုလုက်ုလိုင်ဏယ့် လုက်ဖိုင်မိင်ဖႜဟ် ယှူးဘှ်ကိုဝ်ၜင် ထုက်ကောဝ်ကြင်လှ် သာယင်သံင်းထ လဝ်ဟှိုင့်လှ်။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/kjp/ယ်ု&oldid=4396661"
Last edited on 22 September 2018, at 00:43
This page was last edited on 22 September 2018, at 00:43.